ဝန်ဆောင်မှု streaming ကိုအကောင်းဆုံးတီဗီနှင့်ရုပ်ရှင်များဘယ်ဟာဖြစ်ပါသည်? - သတင်း Rule
ဝန်ဆောင်မှု streaming ကိုအကောင်းဆုံးတီဗီနှင့်ရုပ်ရှင်များဘယ်ဟာဖြစ်ပါသည်?
ကျနော်တို့ Netflix နဲ့နှိုငျးယှဉျ, အမေဇုံ, မိုးကောင်းကင်, Wuki, TalkTalk တီဗီ(Blinkbox), Google Play နဲ့ iTunes
အမည်ပေးထားသောဤဆောင်းပါး “ဝန်ဆောင်မှု streaming ကိုအကောင်းဆုံးတီဗီနှင့်ရုပ်ရှင်များဘယ်ဟာဖြစ်ပါသည်?” ရှမွေလသည် Gibbs ကရေးသားခဲ့, theguardian.com အင်္ဂါနေ့က 2nd ဖေဖေါ်ဝါရီလအပေါ်များအတွက် 2016 07.00 ကမ္ဘာတစ်လွှားကိုသြဒိနိတ်အချိန်
သင့် TV နှင့်ရုပ်ရှင်-ကိုကြည့်လိုအပ်ချက်များကို sate တစ်ခုဝေဟင်သို့မဟုတ်ဂြိုဟ်တုပန်းကန်လိုအပ်၏နေ့ရက်ကာလတာရှည်သွားပြီဖြစ်ကြောင်း. အစာရှောင်ခြင်းဘရော့ဘန်းဆက်သွယ်မှုများကိုအကြောင်းအရာကိုရယူတစ်ပြင်လုံးကိုနည်းလမ်းသစ်ဖွင့်ဖွင့်လှစ်ပြီ, streaming များန်ဆောင်မှုတစ်ခုကြီးထွားလာတယ်ဆိုတာသိနိုင်ပါတယ် spawning. ဒါပေမယ့်အရာတစျခုအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်?
အားလုံးကတော့ streaming များဝန်ဆောင်မှုများကိုအညီအမျှဖန်တီးနေကြတယ်. တစ်ဦးကအများကြီးစာကြည့်တိုက်များထပ်ပြီ, ဒါပေမယ့်လူအများစျေးနှုန်းလှသောကွဲပြား, သငျသညျသုံးစက်ကိရိယာများပေါ်တွင်အရည်အသွေးနှင့်ရရှိနိုင်မှု.
Netflix ဟာအကောင်းဆုံးအရည်အသွေးစီးနှင့်အကျယ်ဆုံးစက်ကို support ကိုတယောက်ရှိပါတယ်. ဓါတ်ပုံ: Elise Amendola / AP
စျေးနှုန်း: £ 5,99 – £ 8,99 တစ်လ
ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ဒီမှာပြိုင်ဘက်များ၏ယန္တရား Netflix ဖြစ်ပါသည်, အမေရိကန် DVD ကိုငှားရမ်းကုမ္ပဏီအဖြစ်စတင်ခဲ့ပြီးကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ streaming ဝန်ဆောင်မှုသို့ morphed သော.
စျေးနှုန်းများကိုသင်တစ်ချိန်တည်းမှာစောင့်ကြည့်ဖို့လိုခငျြမည်မျှဖန်သားပြင်ပေါ်မှာအခြေခံပြီး£6ကနေ£9အထိ, အဖြစ်စီး၏ဆုံးဖြတ်ချက်, သောကာလပတ်လုံးသင်၏အင်တာနက်ချိတ်ဆက်မှုနှင့်ထုတ်ကုန်ကကိုင်တွယ်ထိန်းသိမ်းနိုင်အဖြစ်ထိပ်ဆုံးမှာ 4K တို့သို့.
Netflix ရဲ့အစွမ်းသတ္တိကိုက၎င်း၏ Cross-platform ကိုအထောက်အပံ့နှင့် streaming များအရည်အသွေး, သောဝေးအများဆုံးအခြားဝန်ဆောင်မှုများကျင့်ထက်မလွန်. ရရှိနိုင်တာဆို device ကိုအပေါ် Netflix နဲ့ stream မှ app တစ်ခုသို့မဟုတ်လမ်းရှိပါတယ်, အချို့သောအဟောင်းများစမတ်တီဗီများချွင်းချက်ရှိပါတယ်ပေမယ့်. Netflix နဲ့တစ်ဦး streaming သာဝန်ဆောင်မှုဖြစ်ပါတယ်, သို့သော်, သောသငျသညျအော့ဖ်လိုင်းကြည့်ရှုဘို့ပြပွဲသို့မဟုတ်ရုပ်ရှင်ကို download လုပ်မပေးနိုငျခွငျးကိုဆိုလို.
အဆိုပါကုမ္ပဏီရဲ့ content catalog တိုင်းပြည်များကကွဲပြားခြားနားသည်. UK ရှိ, ကနှင့်အတူအတော်လေးသေးငယ်သည် 3,000 ရှာဖွေရေးဝန်ဆောင်မှု UNOG streaming မှအချက်အလက်များအရသိရသည်ရရှိနိုင်ရုပ်ရှင်တွေ. Netflix နဲ့သာအဟောင်းတွေသို့မဟုတ်လျော့နည်းလူကြိုက်များရှိုးများကကျောထောက်နောက်ခံပေးထားတဲ့အနည်းငယ်ကြီးမားတဲ့ name ကိုအသစ်တီဗီရှိုးရှိပါတယ်. ရုပ်ရှင်တွေပုံမှန်အားဖြင့်သူတို့လစာ TV ပေါ်မှာရရှိနိုင်ပါသည်လပေါင်းများစွာပြီးနောက်ပေါ်လာ. ၎င်း၏အမေရိကန်စာကြည့်တိုက်ကိုအများကြီးပိုကျယ်ပြန့်သည်.
Netflix နဲ့လုပ်သို့မဟုတ်သီးသန့်တီဗီရှိုး, ကဒ်၏အိမ်အပါအဝင်, ဂျက်စီကာဂျုံးစ်, နှင့်လိမ္မော်ရောင်သစ်က Black ဖြစ်ပါတယ်, လူကြိုက်များသက်သေပြခဲ့ကြ.
ဆုံးဖြတ်ချက်: အကောင်းဆုံး Cross-platform ကိုအထောက်အပံ့နှင့် streaming များအရည်အသွေးပြည့်, UK ရှိစာကြည့်တိုက်ကိုအတော်လေးသေးငယ်သည်
Ex-ထိပ်တန်းဂီယာတင်ပြချုပ်နှင့်အတူရရှိနိုင်ပါအမေဇုံလက်ငင်းဗီဒီယိုအပေါ်တစ်ဦးကားအသစ်ပြသရလိမ့်မည်. ဓါတ်ပုံ: အမေဇုံ / PA ဆိုပြီး
စျေးနှုန်း: £6လသို့မဟုတ် Amazon ရဲ့£ 79 တစ်နှစ်လျှင်ချုပ်ကြေးပေးသွင်း၏တစိတ်တပိုင်း
Amazon ရဲ့ဗီဒီယို streaming ဝန်ဆောင်မှုလည်းတိုင်းပြည်များကကွဲပြားခြားနားသည်. ၎င်း၏စာကြည့်တိုက်ကိုအမေရိကန်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကဗြိတိန်တွင်ကွဲပြားခြားနားသည်, ဥပမာအားဖြင့်, ဒါပေမဲ့တကရုပ်ရှင်နဲ့ TV ပြသငှားရမ်းသို့မဟုတ်ဝယ်ဝန်ဆောင်မှုနှင့်အတူတစ်ကြေးပေးသွင်းဝန်ဆောင်မှုပေါင်းစပ်.
Amazon ရဲ့ချုပ်ဝန်ဆောင်မှုစာရင်းသွင်းသောသူတို့အဘို့, အသုံးပြုသူများသည်ရုပ်ရှင်နှင့်ရုပ်မြင်သံကြားအပိုင်းတစ်ပိုင်းကိုသာလျှင်ရယူမကြာခဏတဲ့ TV ၏ရာသီ၏ပထမဦးဆုံးစုံတွဲလည်းပါဝင်သည်ကွောငျးဖျောပွသ. အောက်ပါရာသီထို့နောက်တစ်ဦးအပိုဆောင်းကြေးများအတွက်ရရှိနိုင်ပါ. ၎င်း၏ရုပ်ရှင်ရွေးချယ်ရေးအများအပြား streaming များအထူးသီးသန့်ရှိပါတယ်, ဒါပေမဲ့ Netflix နှင့်ဝသကဲ့သို့သူတို့မကြာခဏပေါ်လာဖို့ခဏတစ်ယူ. လူကြိုက်များရှိုးများဗြိတိန်စာကြည့်တိုက် Netflix နဲ့မှအကြောင်းအရာများအတွက်ကွဲပြားခြားနားတဲ့ဒါပေမဲ့အရွယ်အစားနှိုင်းယှဉ်သည်. ပျေါလှငျမစ္စတာစက်ရုပ်ပါဝင်, alpha အိမ်နှင့် Transparent.
အမေဇုံအများအပြား consoles စနေတဆင့် streaming များကိုထောက်ပံ့, ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်မီးသတ် TV နဲ့တက်ဘလက်ပစ္စည်းတွေ, iOS ထုတ်ကုန်များနှင့် In-browser ကိုထောက်ခံမှု. တီဗီရှိုးများနှင့်ရုပ်ရှင်များက iOS devices တွေကိုအပေါ်အော့ဖ်လိုင်းကြည့်ရှုဘို့သိမ်းဆည်းထားနိုင်ပါတယ်. အမေဇုံအားဖြင့်မဖန်ဆင်း Android ထုတ်ကုန်များအတွက်အထောက်အပံ့ဆင်းရဲ, အမေဇုံမြေအောက်စတိုးဆိုင်မှတဆင့်အမေဇုံဗီဒီယို app ကို install လုပ်မယ့် Multi-ခြေလှမ်း process ကိုလိုအပ်, သောကကို Google Play စတိုးမှာမရရှိနိုင်အဖြစ် Amazon ရဲ့ website ကနေ download လုပ်ရဦးမည်.
လွှအရည်အသွေးအ Netflix နဲ့ဆင်တူသည်နှင့် Amazon ရဲ့မီးသတ်တီဗီသေတ္တာနှင့်အတူ 4K အထိဆန့်လိမ့်မည်.
ဆုံးဖြတ်ချက်: တစ်လျောက်ပတ်သော streaming များ subscription ကို, နောက်ထပ်လစာသည်ရွေးချယ်စရာကအများဆုံးပြည့်စုံသောဝန်ဆောင်မှုအောင်နှင့်အတူ
က Sky အခုဆိုရင် TV ကို
Thrones ၏ဂိမ်းသာအခုဆိုရင် TV ကိုဖျော်ဖြေရေးမှတဆင့်တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်က Sky-သီးသန့်ပြသ၏တစျခုဖွစျသညျ. ဓါတ်ပုံ: Alamy
စျေးနှုန်း: ရုပ်ရှင်တွေ£ 9.99 (လ), Entertainment က£ 6,99 (လ), အားကစား£ 6,99 (နေ့), £ 10,99 (ရက်သတ္တပတ်), လ (£ 31,99)
Sky ၏အခုဆိုရင် TV ကိုသုံးသီးခြားန်ဆောင်မှုသို့ခွဲခြားဖြစ်ပါတယ်: အားကစား, ဖျော်ဖြေရေးနှင့်ရုပ်ရှင်ရုပ်ရှင်. တစ်ခုချင်းစီကိုသငျသညျ Sky ၏တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှလိုင်းများမှဝင်ရောက်ခွင့် streaming ပေးသည်, On-demand အကြောင်းအရာနှင့်ယမန်.
Entertainment က Freeview အပေါ်မရရှိနိုင်ကြောင်း Sky ၏အစဉ်အလာလမ်းကြောင်းများနှင့်အချို့သောအခြားသူများအားလည်းပါဝင်သည်, အဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ် box ရဲ့တစ်ဦးမျှမျှတတကြီးမားသောစုဆောင်းခြင်းရုပ်မြင်သံကြားရှိုးသတ်မှတ်ထား, လက်ရှိ hit တီဗီရှိုးအပါအဝင်. ရုပ်ရှင်တွေအကြမ်းဖျင်းက Sky ရုပ်ရှင်နှင့်လည်းပါဝင်သည် 1,000 On-demand ကြည့်ရှုဘို့ရုပ်ရှင်တွေ, သူတို့ကတခြားကြေးပေးသွင်းန်ဆောင်မှုအပေါ်ပြုပါမီကကောင်းစွာပေါ်လာကြောင်းအများအပြားအပါအဝင်. အားကစားခုနစျပါးက Sky Sports နှင့်လိုင်းများမှတိုက်ရိုက်ဝင်ရောက်ခွင့်ကိုပေး.
အဆိုပါ TV နဲ့ Movie, packages များလက်ရှိနှင့်အသစ်ပြပွဲနှင့်ရုပ်ရှင်၏အကြီးဆုံးအကွာအဝေးရှိသည်, ဒါပေမဲ့သူတို့အလွယ်တကူန်ဆောင်မှုမှသက်တမ်းကုန်ဆုံး, နောက်ပိုင်းတွင်ဤကဲ့သို့သော Netflix ကဲ့သို့သောအခြား streaming များပံ့ပိုးပေးအပေါ်ထင်ရှားကျော်ကြားသော. အခုတော့တီဗီရဲ့အားသာချက်စာရင်းသွင်းခြင်းဝန်ဆောင်မှုအဘို့ထိုသူတို့ပထမဦးဆုံးရတဲ့ဖြစ်ပါတယ်, Blu-ray သို့မဟုတ် DVD ကိုအပေါ်ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါသည်ဖြစ်ခြင်းပြီးနောက်မကြာခဏသာရက်သတ္တပတ်.
အခုဆိုရင် TV ကိုဖွင့်ပြိုင်ကားပူဇျောသက်ကာပရီမီယံအားကစားမှတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှ streaming များဝင်ရောက်ခွင့်ပေးနီးပါးထူးခြားသောဖြစ်ပါသည်, သာ BT အားကစားအလားတူထောက်ပံ့နှင့်အတူ.
အ streaming များ၏အရည်အသွေး, HD ကိုစဉ်, Netflix သို့မဟုတ်အမေဇုံအဖြစ်အတော်လေးအဖြစ်မကောင်းမသင့်ဖြစ်၏နှင့် 4K streaming များမထောက်ခံပါဘူး. ဒါဟာအားကစားနှင့်အတူအထူးသဖြင့်သိသာသည်, frame ကိုနှုန်းကိုအစဉ်အလာထုတ်လွှင့်ထက်သိသာဆင်းရဲတဲ့ဖြစ်သကဲ့သို့.
ထုတ်ကုန်၏ Sky ၏ထောက်ခံမှုအတော်လေးကောင်းလှ၏, လျောက်ပတ်သောက Android နှင့်အတူ, iOS နှင့် console ကို apps များ, Roku ထောက်ခံ, Microsoft ရဲ့ Silverlight ကို အသုံးပြု. LG ရဲ့စမတ်တီဗီများနှင့်ကွန်ပျူတာအချို့. သို့သော်၎င်း၏ထောက်ခံမှု Netflix ဟာအဖြစ်အတော်လေးအဖြစ်ကွဲပြားခြားနားသည်မဟုတ်.
ဆုံးဖြတ်ချက်: စျေးကြီး, သင်မူကားဖြစ်ဖြစ်အခြားကြေးပေးသွင်းန်ဆောင်မှုမပြုမီလမ်းရဖို့သို့မဟုတ်ရရှိသွားတဲ့မနိုင်အကြောင်းအရာရှိပါတယ်
Entertainment က **** ရုပ်ရှင်တွေ **** အားကစားဆိုင်ရာ ****
က Sky Store က
ဦးလေးအနေဖြင့်လူသားခြင်းက Sky Store ကဝက်ဘ်ဆိုက်. ဓါတ်ပုံ: က Sky Store က
စျေးနှုန်း: 99p ထံမှငှားရမ်း, £ 5,99 မှမဝယ်
အဖြစ်ယခု TV နဲ့က Sky Go ကို, တစ်ဦးဂြိုဟ်တုကြေးပေးသွင်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အဖြစ်သာရရှိနိုင်သော, က Sky လည်းက Sky Store ကလို့ခေါ်တဲ့သီးခြားရုပ်ရှင်ငှားရမ်းမှုနှင့်ဝယ်ယူဝန်ဆောင်မှုရှိပါတယ်. ဒါဟာကိုယ့်ရုပ်ရှင်တွေရဲ့, ဒါပေမဲ့အကြောင်းလည်းပါဝင်သည် 1,000 ထိုရုပ်ရှင် Blu-ray နဲ့ DVD ကိုအပေါ်ပြန်လွတ်လာကြသည်အဖြစ်တစ်ချိန်တည်းပတ်ပတ်လည်ပေါ်လာတဲ့အစိုင်အခဲရွေးချယ်ရေးနှင့်အတူရုပ်ရှင်တွေ.
က Sky Store ကတဆင့်ဝယ် movies အသုံးပြုသူရုပ်ရှင်တစ်ခု HD ကိုစမ်းချောင်းမှဝင်ရောက်ခွင့်ပေး, ပေါင်းတစ် DVD ကိုလွန်ကာလ၌မိမိတို့အိမ်သို့စေလွှတ်တော်မူ. ငှားရမ်းခြင်း SD ကသာ၌ရှိကြ၏နှင့် 99p မှာစတင်. ရုပ်ရှင်တွေဆေးပြားအမျိုးမျိုးမှတဆင့်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်, ကွန်ပျူတာနှင့် streaming များ boxes တွေကို, ဒါပေမဲ့အရည်အသွေးကွဲပြားခြားနားသည်. အမြင့်ဆုံး 1080i resolution ကို HD ဗီဒီယိုမှသာ Sky ၏ + HD ကိုသေတ္တာများနှင့်အတူကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်, YouView ထွက်ခွာ, ခုနှစ်, အခုတော့ 720p ကျန်ရစ်တီဗီသေတ္တာများနှင့် tablet. Macs နဲ့ Windows Vista သို့မဟုတ်အဟောင်းတွေကွန်ပျူတာများကို SD ကအကြောင်းအရာသာကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်.
ဆုံးဖြတ်ချက်: သင်တစ်ဦးကို DVD နှင့်အတူဒီဂျစ်တယ်ဝယ်ဖို့ချင်ရုပ်ရှင်တွေအဘို့ကောင်းသော, ဒါပေမယ့်များသောအားဖြင့်အချို့သောကိရိယာများပေါ်တွင်ပြိုင်ဖက်ထက်နိမ့်အရည်အသွေး
TalkTalkTV – ယခင်က BlinkBox – ဧဝရက်တောင်ထိပ်ကိုရုပ်ရှင်ဖြင့်ဝက်ဘ်ဆိုက် ဓါတ်ပုံ: TalkTalkTV
စျေးနှုန်း: £ 3,49 မှ
ယခင်က Blinkbox အဖြစ်လူသိများ, TalkTalk တီဗီစတိုးဆိုင်တစ်ဦးလစာ-per-အမြင် TV နဲ့ရုပ်ရှင်ငှားရမ်းမှုနှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်ဝယ်ယူစတိုးဆိုင်ဖြစ်ပါသည်. တခြားသူတွေအချို့ကိုမတူဘဲ, အဘယ်သူမျှမကြေးပေးသွင်း option ကိုလည်းမရှိ.
အသစ်ရုပ်ရှင်နှင့်တီဗီရှိုးများစာကြည့်တိုက်အတော်လေးကျယ်ပြန့်သည်, နောက်ဆုံးပေါ်တီဗီထိုကဲ့သို့သော Shield ၏အံ့ဩခြင်းရဲ့အေးဂျင်မကြာခဏ TV ပေါ်မှာထုတ်လွှင့်ခံရပြီးနောက်မှသာနာရီပေါ်ထွန်းအဖြစ်ပြသထားတယ်နှင့်အတူ.
ငှားရမ်းထားသောသို့မဟုတ်ဝယ်ယူအကြောင်းအရာ Android ပေါ်မှာကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်, iOS နဲ့ Windows တက်ဘလက်နှင့်စမတ်ဖုန်းများ, Google ရဲ့ Chromecast ကို, ကွန်ပြူတာများ, က PS4 မှလွဲ. consoles စ, Blu-ray player နဲ့စမတ်တီဗီများ၏လက်တဆုပ်စာ၏စုံတွဲတစ်တွဲ. အဆိုပါစမတ်ဖုန်းနှင့် tablet app များကိုလည်းအော့ဖ်လိုင်းကြည့်ရှုဘို့အကြောင်းအရာဒေါင်းလုဒ်ဆွဲနိုင်ပါသည်.
အသုံးပြုသူများစံချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်အတွက်သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုသည်ငွေ HD မှာ streaming များ၏ထို option များ, က 720p နှင့်စတီရီယိုအသံနှင့်အတူသာဖြစ်ပါတယ်ပေမယ့်, Dolby Digital က Plus အား surround sound မဟုတ်.
ဆုံးဖြတ်ချက်: ကောင်းသော Multi-Platform ကိုထောက်ခံမှုနှင့်အတူအသစ်နှင့်လူကြိုက်များကြော်ငြာ-hoc ငှားရမ်းခြင်းနှင့်ဝယ်ယူတဲ့အစိုင်အခဲစာကြည့်တိုက်, ဒါပေမယ့်ဘယ်သူမျှမ 5.1 သို့မဟုတ် 1080p
Wuaki တီဗီကိုဝယ်ခြင်းငှါရွေးချယ်စရာနှင့်အတူပုရွက်ဆိတ်-Man ဖြင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့မဟုတ်ငှား. ဓါတ်ပုံ: Wuaki တီဗီ
စျေးနှုန်း: £ 1,89 ထံမှငှားရမ်း, £ 4.99 ကနေဝယ်ယူ
နောက်ထပ်လစာ-အဖြစ်-you-လက်ပတ်နာရီစတိုးဆိုင်, Wuaki စပိန်အခြေစိုက်နှင့်ဂျပန်လက်လီကုမ္ပဏီသည် Rakuten အားဖြင့် run သည်နှင့်အခြားကြော်ငြာ-hoc န်ဆောင်မှုမှငှားရမ်းသို့မဟုတ်ဝယ်ယူဘို့မကြာသေးမီက-ပြန်လွတ်လာတီဗီရှိုးများနှင့်ရုပ်ရှင်၏အလားတူစုဆောင်းကမ်းလှမ်း.
Device ကိုထောက်ခံမှုအစိုင်အခဲသည်, TalkTalk တီဗီစတိုးဆိုင်အဖြစ် devices များအလားတူအကွာအဝေးဖုံးအုပ်, Chromecast ကိုအပါအဝင်, Xbox ဂိမ်း, iOS ကို, အန်းဒရွိုက် EE တီဗီ, ကွန်ပျူတာနှင့်အချို့သောမတ်တီဗီများ, အသိသာခြွင်းချက်အ PS3 ဖြစ်ခြင်းနဲ့ 4.
သငျသညျ tablet နှင့်စမတ်ဖုန်းအပေါ်အော့ဖ်လိုင်းကြည့်ရှုဘို့အကြောင်းအရာဒေါင်းလုဒ်ဆွဲနိုင်ပါသည်, ဒါပေမဲ့ HD ကိုအကြောင်းအရာဝက်ဘ်ဆိုက်ကနေတစ်ဆင့်ကစားမရနိုငျ, စမတ်ဖုန်းသို့မဟုတ် tablet app များ. တစ်ဦး Chromecast ကိုမှတဆင့် Streaming ကိုကျောက်အစိုင်အခဲကြီးတော်တော်လေးကောင်းသောကြည့်ရှု, ဒါပေမဲ့စတီရီယိုအသံနှင့်သာရရှိနိုင်ခဲ့.
Viki ကနေရရှိနိုင်တဲ့အခမဲ့အကြောင်းအရာတစ်ရွေးချယ်ရေးလည်းရှိပါသည်, "ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအာရှကနေ TV နဲ့ပိုပြီး" အဖြစ်အမည်တပ်ထားသောအရာ, ထိုသို့သောပလတ်စတစ်ပူဖောင်းအတွက်ဂျွန်ထရာဗိုလ်၏ The Boy အဖြစ်နှင့်အနည်းငယ်အခမဲ့ရုပ်ရှင်တွေ.
ဆုံးဖြတ်ချက်: သငျသညျကို set up တစ်အိမ်မှာရုပ်ရှင်ရုံရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးလျှင်မကြာသေးမီကလွတ်မြောက်လာရုပ်ရှင်နှင့်တီဗီငှားရမ်းများအတွက်လျောက်ပတ်သော option ကို
Google ကရုပ်ရှင်တွေ Play Play Store ကို၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်, ကွန်ပျူတာများကိုဖြတ်ပြီးမရရှိနိုင်, ထုတ်ကုန်နှင့်အချို့သောမတ်တီဗီများနှင့် set-top box များ. ဓါတ်ပုံ: –/Photo: AFP / Getty Images
စျေးနှုန်း: £ 1,89 မှ
Google ရဲ့ရုပ်ရှင်နဲ့ TV စတိုးဆိုင်က၎င်း၏ app ကိုမှာအတူတူပင်ဆိုင်သို့တည်ဆောက်, Android နှင့်အခြားထုတ်ကုန်များအတွက်တေးဂီတနှင့်စာအုပ်များ. TalkTalk တီဗီစတိုးဆိုင်အလားတူထုံးစံ၌ရုပ်ရှင်ရုပ်ရှင်နဲ့ TV လုပ်ကိုင် Play, လစာ-အဖြစ်-သင်ငှားရမ်းသို့မဟုတ်ဝယ်ဘို့ကမ်းလှမ်းမှု watch နှင့်အတူ.
ဒါဟာအလားတူစာကြည့်တိုက်ရှိတယ်, အများဆုံးတက်နေ့စွဲရုပ်ရှင်နှင့်တီဗီရှိုးဖို့အများကြီးအခြားဝန်ဆောင်မှုများရှေ့တော်၌ထင်ရှားကျော်ကြားသောနှင့်အတူ. ဒါဟာ Android ထဲကိုအစိုင်အခဲပေါင်းစည်းမှုရှိပါတယ်, သငျသညျမြျှောလငျ့မယ်လို့အဖြစ်, ဒါပေမယ့်လည်း Roku boxes တွေကိုထောက်ခံပါတယ်, ကွန်ပြူတာများ, Chromecast ကို, Android တီဗွီ, Apple ရဲ့ iPad နဲ့ iPhone နှင့်အခြားသူများကို.
လွှအရည်အသွေးမြင့် 1080p အထိမြတ်သောဖြစ်ပါသည်, ရုပ်ရှင်နှင့်တီဗီရှိုးအော့ဖ်လိုင်းကြည့်ရှုဘို့စမတ်ဖုန်းနှင့် tablet များမှဒေါင်းလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်စဉ်.
ဆုံးဖြတ်ချက်: စျေးနှုန်းချိုသာ, အတူ 5.1 အသံနဲ့အချို့သော pay-per-အမြင်ပြိုင်ဘက်ထက် သာ. ကောင်း၏အရည်အသွေးပေမယ်နည်းပါးလာထုတ်ကုန်များအတွက်ပံ့ပိုးမှုဖြင့်
Apple က iTunes ကို
iTunes ကရုပ်ရှင်တစ်ဦးက Apple TV ပေါ်မှာပြန်ကစားခံရ. ဓါတ်ပုံ: ပန်းသီး
စျေးနှုန်း: £ 1,89 မှ (SD က), £ 2,49 (HD ကို)
iTunes ကိုသို့တည်ဆောက် Apple ရဲ့မီဒီယာစတိုးဆိုင်ရရှိနိုင်ပါပထမဦးဆုံးတဦးနှင့်နေဆဲအကောင်းဆုံးစတော့ရှယ်ယာတစ်ခုဖြစ်တယ်. တီဗီရှိုးများနှင့်ရုပ်ရှင်များကို Google Play အဖြစ်အကြောင်းကိုတစ်ချိန်တည်းမှာရောက်လာခြင်းနှင့်အခြား pay-per-အမြင်န်ဆောင်မှု. အဘယ်သူမျှမကြေးပေးသွင်းဟာယပူဇော်သက္ကာရှိပါတယ်, သင်မူကားဝယ်ခြင်းသို့မဟုတ်နောက်ဆုံးပေါ်လွှတ်ပေးမှုအဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်တာအဟောင်းတွေပစ္စည်းပစ္စယများအများဆုံးငှားနိုင်.
Device ကိုထောက်ခံမှု Apple ထုတ်ကုန်နှင့်ဆော့ဖ်ဝဲမှကန့်သတ်သည်, အိုင်ပက်အပါအဝင်, iPhone ကို, install လုပ်ပြီး iTunes ကိုနှင့်အတူ Apple က TV နဲ့ကွန်ပျူတာများ. တီဗီရှိုးများနှင့်ရုပ်ရှင်များကိုအော့ဖ်လိုင်းကြည့်ရှုဘို့ကို download ရနိုင်, နှင့် Dolby နှင့်အတူ 1080p အတွက်ရရှိနိုင်ပါ 5.1 surround sound.
ဆုံးဖြတ်ချက်: အလွန်ကြီးစွာသောအရည်အသွေးမြင့်ဝယ်နှင့်အငှားစာကြည့်တိုက်ပေမယ့်ကန့်သတ်နှင့်အတူ (Apple ကသာ) device ကိုထောက်ခံမှု
35492	2 အမေဇုံချုပ်လက်ငင်းဗီဒီယို, Amazon.com, ပန်းသီး, အပိုဒ်, broadband, Google က, အင်တာနက်ကို, iTunes က, မီဒီယာ, Netflix နဲ့, ပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များ, ရှမွေလသည် Gibbs, က Sky plc, TalkTalk တယ်လီကွန်း, နည်းပညာ, ရုပ်မြင်သံကြား, ရုပ်မြင်သံကြားစက်မှုလုပ်ငန်း, ဝယ်လိုအားအပေါ်ဗီဒီယို
← အကယ်. သင်သည် Windows Run နိုင်သ 95 သင့်ရဲ့ Browser ကိုအတွင်းပိုင်းအခုတော့ [က PC World] ဆေးခြောက်နှုတ်ဖြင့်မှတ်ဉာဏ်အခက်တွေ့စေသော →